सीटीईभीटी भित्र जागिर खाने र खुवाउने पारिवारिक जालो – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ सीटीईभीटी भित्र जागिर खाने र खुवाउने पारिवारिक जालो
सीटीईभीटी भित्र जागिर खाने र खुवाउने पारिवारिक जालो
पुलेसो ५ माघ, २०७७, सोमबार ११:४१
सानोठिमीस्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) भित्र जागिर खाने र खुवाउने पारिवारिक जालोका केही प्रतिनिधि पात्र हुन् उनीहरू । सीटीईभीटीका तीन कर्मचारी संगठनका अध्यक्षका आफन्त हुन् यिनीहरू । अध्यक्षहरू मात्रै किन ? पहुँचवाला कर्मचारी, निर्देशक र पूर्वसदस्यसचिवका आफन्तसमेत धेरैले ठूलो संख्यामा नातागोतालाई जागिर खुवाएका छन् ।
वरिष्ठ लेखा अधिकृत प्रमोदभक्त आचार्य नीति निर्धारण शाखामा छन् । उनकी श्रीमती गीता ढुंगाना प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टीआईटीआई) मा छिन् । केही महिना अघिसम्म प्रमोद पनि टीआईटीआईमै प्रशासनिक प्रमुख पदमा थिए । अर्का वरिष्ठ लेखा अधिकृत टीकानिधि खनाल सीप विकास परियोजनामा छन् भने श्रीमती शोभा सीटीईभीटी ९इन्स्योर प्रोजेक्ट० मा छिन् । अर्का वरिष्ठ लेखा अधिकृत उमेश खरेल सीप परीक्षणमा छन् भने उनकी श्रीमती मीना टीआईटीआईमा छिन् । प्रशासकीय अधिकृत विमल ढकाल कानुन शाखामा छन् भने उनकी श्रीमती सीमाकुमारी श्रेष्ठ टीआईटीआईमा छिन् । प्रकाशकीय अधिकृत शैलेन्द्र पण्डित पनिकामा छन् भने उनकी श्रीमती चन्द्रकला पौडेल राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिमा छिन् ।
यहाँ एमालेको कर्मचारी संगठन, कांग्रेसको संघ र माओवादीको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । उनीहरू कर्मचारीको हकहित भनेर आफन्तलाई जागिर खुवाउन सक्रिय छन् भन्ने तथ्यहरूले नै देखाउँछ । संगठन अध्यक्ष साहका भाइ वीरेन्द्र, बुहारी इन्द्रिका र भान्जी कविता मात्र होइन, संगठनकै उपाध्यक्ष ठाकुर भट्टराईकी श्रीमती दुर्गा चापागाईं, उपमहासचिव किशोरचन्द्र शर्माकी श्रीमती सुष्मा वाग्ले, संगठनका महासचिव ईश्वरी देवकोटाकी श्रीमती निर्मला गिरी, पूर्वउपाध्यक्ष सूर्य अधिकारीकी साली कल्पना जिरेल पनि यहाँका जागिरे छन् । अध्यक्ष साहले भाइबुहारी र आफन्त आफ्नै क्षमतामा जागिरमा प्रवेश गरेको दाबी गरे । ‘म उनीहरूभन्दा पहिला प्रवेश गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरू प्रतिस्पर्धाबाटै छिरेका हुन् । म शाखा अधिकृतको कुरा कसले सुन्थ्यो र ?
सीटीईभीटीमा यतिविघ्न ‘मनपरी’ हुन थालेपछि अख्तियारको चासो रहनु स्वाभाविकै हो । तर यहाँ अनियमितता ढाकछोप गर्न मिलेमतोमा अख्तियारका कर्मचारीले पनि लाभ उठाएर आफन्तलाई जागिर खुवाएको भेटियो । सीटीईभीटीले प्रक्रिया पूरा नगरी फारवेस्ट टेक्निकल कलेज धनगढी, रम्भादेवी टेक्निकल कलेज बुटवल, भ्याली कलेज अफ इन्जिनियरिङ नयाँ बानेश्वर र सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ कलेज बालकुमारी ललितपुरलाई १७ वैशाख २०६७ को १०७ औं बैठकले ०६७र६८ का लागि तीन वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले १ भदौ ०६७ मा यो विषयमा अनियमितता भएको भनेर छानबिन गर्न समिति बनायो ।
स्वीकृति दिँदा आर्थिक चलखेल भएको प्रतिवेदन समितिले बुझायो । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थाल्यो । तर आयोगले थप अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाएन । उल्टो फाइल तामेलीमा राखिदियो । केही समयभित्रै अनुसन्धान अधिकृत सुवास पण्डितकी श्रीमती सरस्वती शर्मा सीटीईभीटीमा जागिरे भइन् । हलवार–२ दाङकी शर्माले १८ चैत ०६७ मा करार सेवामा जागिर पाइन् र २६ साउन ०७२ मा उनी स्थायी पनि भइन् । अहिले उनी टेक्निकल एजुकेसन इन कम्युनिटी स्कुल ९टेक्स० महाशाखामा कार्यरत छिन् । हाल अवकाश लिइसकेका पण्डितले आफूले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन फाइल उठाए पनि अरूले गर्दा तामेलीमा गएको तर्क गरे । श्रीमती सरस्वतीलाई सीटीईभीटीले जागिर दिएपछि फाइल तामेली राख्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा पण्डितले भने, ‘म त मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ,पछि साथीहरूले तामेलीमा राख्नुभएको हो ।’
सीटीईभीटीमा बारम्बार ताला लगाउने र विरोध गर्ने विद्यार्थी नेता ९काभ्रेका प्रदेश सांसद० रत्न ढकालकी श्रीमती यहीँकी जागिरे छिन् । ढकाल क्रान्तिकारीका सीटीईभीटी संयोजक भएका बेला श्रीमती मेनुका घिमिरेले यहाँ जागिर पाएकी हुन् । त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङकी श्रीमती दुर्गा भट्टराई सीटीईभीटीको साँखुस्थित शंकरापुर पोलिटेक्निकमा कार्यरत छिन् । नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष गणेश भट्टकी श्रीमती कलावती सीटीईभीटीमै जागिरे छिन् । एक जना निर्देशकका भनाइमा, ‘यहाँ चर्को विरोध गर्नेको मुख बन्द गर्न पनि उसका आफन्तलाई जागिर खुवाउने चलन छ ।’
कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले ९०४८–०५१० शिक्षामन्त्री हुँदा सीटीईभीटीलाई कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती केन्द्र बनाएका थिए । उनी मन्त्री हुँदा गोरखाका सरोज देवकोटा सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष थिए । ‘त्यतिबेला उनीहरूले एकैपटक पाँच सयलाई जागिर खुवाए,’ सीटीईभीटीका पूर्वनिर्देशक एवं शिक्षाविद् टंकनाथ शर्मा भन्छन्, ‘सीटीईभीटीमा प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका कर्मचारी आवश्यक हो । तर उनीहरूले साधारणतर्फका कर्मचारी भरे ।’
त्यसबेला जागिरमा छिरेकाहरू सबैजसो जोशीका कार्यकर्ता, नातागोता र देवकोटाका आफन्त छन् ।यहाँ एकै परिवारका सदस्य र आफन्तको ‘जालो’ रहेका धेरै उदाहरण छन् । कुनै बेला सदस्यसचिव भएका देवकोटा खलकको उदाहरण हेरौं । जिता–६ लमजुङकी रजनी देवकोटाले २१ असार ०५३ मा यहाँ जागिर प्रवेश गरिन् । उनी अहिले प्रशासनिक अधिकृत छिन् । उनका भाइ शंकर न्यौपाने सीटीईभीटीमै जागिरे छन् । पालुङटार–५ गोरखाका उनका देवर रामहरि देवकोटा १४ साउन ०५४ देखि जागिरे छन् । उनीहरूमध्ये रामहरि सीटीईभीटी पोलिटेक्निकमा उपनिर्देशक छन् । रजनी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) मा प्रशासकीय अधिकृत छिन् । शंकर स्कुल अफ हेल्थ साइन्स भरतपुरमा छन् । उनीहरूबाहेक पनि यहाँ देवकोटा नाता पर्ने धेरै कर्मचारी छन् ।
लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर खडकाकी श्रीमती र साली पनि यहाँ जागिरे हुन् । खडका ०५३ मा प्रवेश गरेका थिए, ०६५ मा स्थायी भए । उनकी श्रीमती बिनु ०५६ मा प्रवेश गरेर ०६५ मा स्थायी भइन् । खडकाले साली इनुलाई पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गराए । उनी ०७२ कात्तिकमा स्थायी बनिन् ।पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक दीपक नेपाली क्षत्रीका पाँच जना आफन्त सीटीईभीटीमा छन् । दीपकभन्दा अघि उनकी श्रीमती उषाले जागिर खाइसकेकी थिइन् । उषा २४ मंसिर ०५३ मा प्रवेश गरेकी हुन् । उषाका भाइ केशव मिश्र र बुहारी सरस्वती मिश्र पनि सीटीईभीटीमै छन् । केशवले ०४५ मा सीटीईभीटी प्रवेश गरेका थिए भने उनले श्रीमती सरस्वतीलाई ०६१ मा जागिरमा छिराए । सरस्वतीे २ वर्षअघि स्थायी भइसकेकी छन् । दीपकले अवकाश पाइसके ।
सीटीईभीटीबाट सहजै सूचना नपाएपछि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवरण लिएका हौं । अहिलेसम्म फेला पारेको तथ्यांकमा यहाँ ३१ जोडी श्रीमान्–श्रीमती मात्रै छन् । ज्वाइँ–जेठान ४ जना, दाजु–भाइ २४ जना, बाबु–छोरा ८ जना, बहिनी–ज्वाइँ ४ जना छन् । त्यस्तै भतिजी र ज्वाइँ २ जना, साडुदाइ–साडुभाइ ८ जना, सालारसाली–भिनाजु ६ जना, देवर–भाउजू २ जना, काका–भतिज २ जना, दिदी–भाइ४ जना, भान्जा–भान्जी ४ जना छन् ।कान्तिपुर